Iziporho ezinamaxabiso aphantsi okanye iipropathi ezibizayo? | Amadoda aQinisekileyo
Nangona bengakwazanga ukwenza ukuba onke amantombazana alale ekuvukeni kwethu (njengoko bafuna sikholelwe kwezinye iimveliso), i deodorants Ziyimveliso yokhathalelo lomntu kuyo nayiphi na indoda.
Uninzi lwamadoda aluthambisa ubuncinci kanye ngemini, nokuba luhlobo lwesiporizer okanye intonga, ngesiqhelo emva kokuhlamba nangaphambi kokuphuma, apho kuya kusinceda ukufihla amabala nevumba elibonakala xa amakhwapha baqala ukubila. Ngokudabukisayo, oku kuqheleke ngakumbi ebusika ngenxa yempembelelo yokufudumeza kwiindawo esizindwendwelayo.
Nangona kunjalo, ngaphandle kwento yokuba banayo, kwaye okuninzi, asibaniki ii-deodorants ukubaluleka okubafaneleyo xa kuziwa kumcimbi wezoqoqosho. Rhoqo amaxesha, siye kwelonaxabiso liphantsi evenkileni ngaphandle kokwazi ukuba iifomyula zabo zinokuqulatha izinto eziyingozi njenge-aluminium kunye nezinye iikhemikhali. Isizathu sinokuba zibonakala ngathi azibalulekanga kakhulu kwizikhephe ukuba zingahlawula ngaphezulu kwe-euro ezingama-10, kodwa ukuba siyabuxabisa ubungakanani bayo kunye nexesha, siyakuqonda ukuba ayilotyalo-mali olubi kwaphela, ngokuchaseneyo. Isiporoli esimnandi sinokusigcina iinyanga, esingaphezulu kunoko kunokutshiwo kwezinye iimveliso zebhafu esichitha imali kuzo.
I-Biotherm HOMME AQUAFITNESS (ukubeka inqaku ngaphezulu) yenye yezo umgangatho wokuhambisa deodorants ebesibhekisa kuyo. Ixabisa malunga nee-euro ezingama-25 ezivenkileni (nangona singayifumana kwi-intanethi engaphantsi kwe-15). Isebenza iiyure ezingama-24 kwaye ayiqulathanga iiparabens ezoyikekayo. Ewe lo ngumzekelo nje omnye. Kukho nezinye esinokuzicebisa ngaphandle kokucinga, ezinje ngeMarc Jacobs BANG BANG (ikwintonga) okanye i-LOEWE POUR HOMME (vaporizer).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iifumba » Ngaba unika ii-deodorants ukubaluleka kwazo?
Izinto ezili-10 wonke umntu ekufuneka ezazi malunga noyilo lwangaphakathi